အမေရိကန်နှင့် ဆက်ဆံရေးသည် တစ်ဆစ်ချိုးကာလသစ်ထဲ ရောက်နေပြီဟု တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပြော ( ထရမ့် မရှိတဲ့ အချိန်ကိုမျော်ကြည့်ပြီး သာကောတို့ စဖား လာပါပြီ….) – New Of Burmese
အမေရိကန်နှင့် ဆက်ဆံရေးသည် တစ်ဆစ်ချိုးကာလသစ်ထဲ ရောက်နေပြီဟု တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပြော ( ထရမ့် မရှိတဲ့ အချိန်ကိုမျော်ကြည့်ပြီး သာကောတို့ စဖား လာပါပြီ….)
တရုတ်နှင့် အမေရိကန်အကြား ဆက်ဆံရေးသည် “တစ်ဆစ်ချိုး ကာလသစ်” တစ်ခုထဲ ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပြီး မကြုံစဖူး အကျပ်အတည်း ကာလတစ်ခုနောက်ပိုင်း လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် ပြန်ရောက်သွားနိုင်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ယီက ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်တွင် ဖော်ပြသည့် တရားဝင် ထင်မြင်သုံးသပ်ချက်များတွင် ပြောသွားခဲ့သည်။
ကုန်သွယ်မှု၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ကိုဗစ်-၁၉ မူလဇာစ်မြစ်များနှင့်ပတ်သက်သည့် အငြင်းပွားမှုများအလယ် ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေး အင်အားအကြီးဆုံး နိုင်ငံကြီးနှစ်ခုအကြား ဆက်ဆံရေးသည် တိုးမြင့်ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့သည့် တင်းမာမှုအောက် ကျရောက်နေခဲ့သည်။
နောက်ဆုံး လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအနေဖြင့် အမေရိကန်က တရုတ်ကုမ္ပဏီ ဒါဇင်နှင့်ချီကို နာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းခဲ့ပြီး ထိုကုမ္ပဏီများသည် စစ်တပ်နှင့် ချိတ်ဆက်ပတ်သက်နေသည်ဟု ပြောခဲ့သည်။
မကြာသေးခင်က တရုတ်အပေါ် ထားသည့် အမေရိကန်၏ မူဝါဒများက နှစ်နိုင်ငံစလုံး၏ အကျိုးစီးပွားများအပေါ် ထိခိုက်စေခဲ့ပြီး ကမ္ဘာကြီးအတွက်လည်း ကြီးမားသည့် အန္တရာယ်များကို ယူဆောင်လာခဲ့ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံတော် ကောင်စီဝင်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ယီက ဆင်ဟွာသတင်းအေဂျင်စီနှင့် အခြား နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများနှင့် ပူးတွဲ အင်တာဗျူးတစ်ခုထဲတွင် ပြောခဲ့သည်။
သို့သော် ယခုအခါတွင် “မျှော်လင့်ချက် အခွင့်အလမ်းသစ်တစ်ခု ဖွင့်လှစ်ရန်” နှင့် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးမှု အလှည့်သစ်တစ်ခု စတင်ရန်အတွက် နှစ်ဘက်စလုံးအတွက် အခွင့်အလမ်းတစ်ခု ရှိနေသည်ဟု ၎င်းက ပြောခဲ့သည်။
ဒေါ်နယ်ထရမ့် အစိုးရလက်ထက်က လေးနှစ်ကြာ တင်းမာမှုများ အရှိန်မြင့်ဖြစ်ပေါ်ထားခဲ့ပြီးနောက် ယခု ဂျိုးဘိုင်ဒင် အမေရိကန်သမ္မတအဖြစ် ရွေးကောက်ခံရခြင်းက ဝါရှင်တန်နှင့် ပေကျင်းအကြား ဆက်ဆံရေးကို တိုးတက်စေလိမ့်မည်ဟု ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မျှော်လင့်ရသည်။
ဘိုင်ဒင် ရွေးကောက်ပွဲ နိုင်မှုက အမေရိကန် တရုတ် မူဝါဒကို ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျမှုနှင့် ဆင်ခြင်တုံတရား ရှိမှုဆီ ပြန်ရောက်နိုင်ခွင့်ပြုရန် ၎င်းအနေဖြင့် မျှော်လင့်မိကြောင်း ဝမ်က ပြီးခဲ့သည့်လက ပြောခဲ့သည်။
သို့ရာတွင် ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် တရားဝင် ရာထူးလက်ခံမည့် ရွေးကောက်ခံသမ္မတ ဘိုင်ဒင်က ကုန်သွယ်ရေးနှင့် အခြား ကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍ တရုတ်၏ အလွဲသုံးစားမှုများအတွက် တရုတ်အပေါ် ဆက်လက် ဝေဖန်ထားခဲ့သည်။
၀မ်က ထရမ့် သို့မဟုတ် ဘိုင်ဒင်ကို အမည်တပ် ဖော်ပြသွားခဲ့ခြင်း မရှိသော်လည်း တရုတ်တို့ ရွေးချယ်ထားသည့် လူမှု စနစ်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းကို လေးစားရန် အမေရိကန်ကို တိုက်တွန်းသွားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ဝါရှင်တန်အနေဖြင့် သင်ခန်းစာ ယူမည်ဆိုပါက နှစ်ဘက်အကြား သဘောကွဲလွဲမှုများကို ပြေလည်သွားစေနိုင်သည်ဟု ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောခဲ့သည်။
“တရုတ်ရဲ့ လျင်မြန်တဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ အမေရိကန်မှာ ရှိတဲ့ လူတစ်ချို့က စိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာကို ကျွန်တော်တို့ သိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်လည်း ရေရှည်တည်တံ့အောင် ထိန်းထားအနိုင်ဆုံး ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအနေနဲ့ အခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ တိုးတက်မှုကို ပိတ်ဆို့တာထက် ကိုယ့်ဘာသာပဲ အဆက်မပြတ် ရှေ့ကို ဆက်ရွေ့သွားရမှာဖြစ်တယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသွားခဲ့သည်။
တရုတျနှငျ့ အမရေိကနျအကွား ဆကျဆံရေးသညျ “တဈဆဈခြိုး ကာလသဈ” တဈခုထဲ ရောကျရှိနပွေီ ဖွဈပွီး မကွုံစဖူး အကပျြအတညျး ကာလတဈခုနောကျပိုငျး လမျးကွောငျးမှနျပျေါ ပွနျရောကျသှားနိုငျကွောငျး တရုတျနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး ဝမျယီက ဇနျနဝါရီ ၂ ရကျတှငျ ဖျောပွသညျ့ တရားဝငျ ထငျမွငျသုံးသပျခကျြမြားတှငျ ပွောသှားခဲ့သညျ။
ကုနျသှယျမှု၊ လူ့အခှငျ့အရေးနှငျ့ ကိုဗဈ-၁၉ မူလဇာဈမွဈမြားနှငျ့ပတျသကျသညျ့ အငွငျးပှားမှုမြားအလယျ ကမ်ဘာ့ စီးပှားရေး အငျအားအကွီးဆုံး နိုငျငံကွီးနှဈခုအကွား ဆကျဆံရေးသညျ တိုးမွငျ့ဖွဈပျေါနခေဲ့သညျ့ တငျးမာမှုအောကျ ကရြောကျနခေဲ့သညျ။
နောကျဆုံး လုပျဆောငျခကျြတဈခုအနဖွေငျ့ အမရေိကနျက တရုတျကုမ်ပဏီ ဒါဇငျနှငျ့ခြီကို နာမညျပကျြစာရငျးသှငျးခဲ့ပွီး ထိုကုမ်ပဏီမြားသညျ စဈတပျနှငျ့ ခြိတျဆကျပတျသကျနသေညျဟု ပွောခဲ့သညျ။
မကွာသေးခငျက တရုတျအပျေါ ထားသညျ့ အမရေိကနျ၏ မူဝါဒမြားက နှဈနိုငျငံစလုံး၏ အကြိုးစီးပှားမြားအပျေါ ထိခိုကျစခေဲ့ပွီး ကမ်ဘာကွီးအတှကျလညျး ကွီးမားသညျ့ အန်တရာယျမြားကို ယူဆောငျလာခဲ့ကွောငျး တရုတျနိုငျငံတျော ကောငျစီဝငျ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး ဝမျယီက ဆငျဟှာသတငျးအဂေငျြစီနှငျ့ အခွား နိုငျငံပိုငျမီဒီယာမြားနှငျ့ ပူးတှဲ အငျတာဗြူးတဈခုထဲတှငျ ပွောခဲ့သညျ။
သို့သျော ယခုအခါတှငျ “မြှျောလငျ့ခကျြ အခှငျ့အလမျးသဈတဈခု ဖှငျ့လှဈရနျ” နှငျ့ အပွနျအလှနျ ဆှေးနှေးမှု အလှညျ့သဈတဈခု စတငျရနျအတှကျ နှဈဘကျစလုံးအတှကျ အခှငျ့အလမျးတဈခု ရှိနသေညျဟု ၎င်းငျးက ပွောခဲ့သညျ။
ဒျေါနယျထရမျ့ အစိုးရလကျထကျက လေးနှဈကွာ တငျးမာမှုမြား အရှိနျမွငျ့ဖွဈပျေါထားခဲ့ပွီးနောကျ ယခု ဂြိုးဘိုငျဒငျ အမရေိကနျသမ်မတအဖွဈ ရှေးကောကျခံရခွငျးက ဝါရှငျတနျနှငျ့ ပကေငျြးအကွား ဆကျဆံရေးကို တိုးတကျစလေိမျ့မညျဟု ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ မြှျောလငျ့ရသညျ။
ဘိုငျဒငျ ရှေးကောကျပှဲ နိုငျမှုက အမရေိကနျ တရုတျ မူဝါဒကို ဓမ်မဓိဋ်ဌာနျကမြှုနှငျ့ ဆငျခွငျတုံတရား ရှိမှုဆီ ပွနျရောကျနိုငျခှငျ့ပွုရနျ ၎င်းငျးအနဖွေငျ့ မြှျောလငျ့မိကွောငျး ဝမျက ပွီးခဲ့သညျ့လက ပွောခဲ့သညျ။
သို့ရာတှငျ ဇနျနဝါရီ ၂၀ ရကျတှငျ တရားဝငျ ရာထူးလကျခံမညျ့ ရှေးကောကျခံသမ်မတ ဘိုငျဒငျက ကုနျသှယျရေးနှငျ့ အခွား ကိစ်စမြားနှငျ့ပတျသကျ၍ တရုတျ၏ အလှဲသုံးစားမှုမြားအတှကျ တရုတျအပျေါ ဆကျလကျ ဝဖေနျထားခဲ့သညျ။
ဝမျက ထရမျ့ သို့မဟုတျ ဘိုငျဒငျကို အမညျတပျ ဖျောပွသှားခဲ့ခွငျး မရှိသျောလညျး တရုတျတို့ ရှေးခယျြထားသညျ့ လူမှု စနဈနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုလမျးကွောငျးကို လေးစားရနျ အမရေိကနျကို တိုကျတှနျးသှားခဲ့သညျ။
ထို့ပွငျ ဝါရှငျတနျအနဖွေငျ့ သငျခနျးစာ ယူမညျဆိုပါက နှဈဘကျအကွား သဘောကှဲလှဲမှုမြားကို ပွလေညျသှားစနေိုငျသညျဟု ၎င်းငျးက ထပျလောငျးပွောခဲ့သညျ။
“တရုတျရဲ့ လငျြမွနျတဲ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုနဲ့ပတျသကျလို့ အမရေိကနျမှာ ရှိတဲ့ လူတဈခြို့က စိုးရိမျပူပနျနကွေတာကို ကြှနျတျောတို့ သိပါတယျ၊ ဒါပမေယျ့လညျး ရရှေညျတညျတံ့အောငျ ထိနျးထားအနိုငျဆုံး ခေါငျးဆောငျပိုငျးအနနေဲ့ အခွားနိုငျငံတှရေဲ့ တိုးတကျမှုကို ပိတျဆို့တာထကျ ကိုယျ့ဘာသာပဲ အဆကျမပွတျ ရှကေို့ ဆကျရှသှေ့ားရမှာဖွဈတယျ” ဟု ၎င်းငျးက ပွောသှားခဲ့သညျ။
Previous Article သီတဂူ ဆရာတော် ကြီး၏ နှစ် သစ် ကူး တ ရားပွဲ အနှစ်ချုပ်
Next Article မြန်မာ့အရေး ကုလဆုံးဖြတ်ချက် ရုရှားနဲ့ တရုတ် ကန့်ကွက် ( ဒီတခါတော့ ကြားနေလုပ်ပေတဲ့ မိတ်တွေကောင်းနိုင်ငံတွေကို မေ့ထားလို့မရသလို၊ သာကောနဲ့ပူတင်ကို ကျေးဇူးတင်ရမယ်။)